Bitcoin dia toa | Exonumia
# Bitcoin dia toa
avy amin'i Oleg Andreev 2017/12/10open in new window
Bitcoin dia toy ny vola ara-batana: tsy azo averina ary ianao no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana azy. Raha very ny poketrao ianao dia very ny volanao. Azonao atao ny manome bitcoins amin'ny olona iray hitazona azy ireo ho anao, fa ho toy ny banky rehetra izany: tsy maintsy matoky azy ireo ianao fa tsy handositra ny volanao.
Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny vola ara-batana: afaka mitahiry betsaka araka izay tianao ianao ary tsy haka toerana. Azonao atao ny mandefa azy amin'ny tariby na amin'iza na amin'iza. Tsy azo atao ny manao hosoka. Tsy afaka manome izany ao anatin'ny iray segondra ianao: mba hiantohana marina fa nitranga ny fifampiraharahana, tsy maintsy miandry 10-15 minitra ianao vao havoakan'ny tambajotra ny porofo kriptografika.
Bitcoin dia toy ny volamena: tsy azo vokarina amin'ny sitrapony, misy fetrany ary io vola io dia miparitaka amin'ny continuum spacetime (ny ankamaroan'ny fotoana). Mba hahazoana bitcoins sasany dia tokony homena anao izany, na tokony mitrandraka azy ireo ianao. Tahaka ny volamena, ny Bitcoin dia mamirapiratra: manintona ny olona amin'ny injeniera tsara tarehy, fiteny fandaharana amin'ny fifanarahana, fandrisihana hendry, ary fampanantenana libertarian momba ny fahafahana amin'ny fanerena.
Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny volamena: Ny famatsiana Bitcoin dia raikitra tanteraka amin'ny alàlan'ny fitrandrahana voalahatra (bitcoins be ihany no noforonina isan'ora). Manana antoka ianao fa tsy hisy hahita tampoka tendrombohitra bitgold na hitrandraka azy amin'ny asterôida. Tsy toy ny volamena, ny fahasarotan'ny Bitcoin dia amboarina amin'ny ezaka fitrandrahana mba hitazonana ny fandaharam-potoana. Azonao atao ny mihady ny volamena rehetra ao anatin'ny iray andro, saingy tsy ho vita mihitsy izany miaraka amin'ny Bitcoin na dia haingana toy ny inona aza ny solosaina. Ny fampitomboana ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia afaka manodina kely fotsiny ny fandaharam-potoana (ny tambajotra dia manitsy ny fahasarotana amin'ny famokarana blocs 6 isan'ora, fa raha mitombo hatrany ny tambajotra dia mety hamokatra blocs 7-8 isan'ora).
Bitcoin dia toy ny banky: misy solosaina, tahiry ary fifanakalozana. Ny tahiry dia mitahiry ny tantara manontolo momba ny fandoavam-bola rehetra miditra sy mivoaka: iza no mandefa ohatrinona. Ny zava-drehetra dia nomerika. Tsy misy vaults misy volamena na vata famatsiam-bola manokana, fa ny fitahirizam-boky ao amin'ny "ledger" tokana.
Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny banky: ny tsirairay dia afaka manamarina fa ny angon-drakitra misy azy dia misy angon-drakitra mitovy amin'ny an'ny olon-drehetra. Tsy misy mpitantana miandraikitra ny fanavaozana ny bokim-bola sy ny fanaovana antoka fa tsy voakorontana. Mety manana kaonty betsaka araka izay tiany ny olona rehetra ary tsy mitonona anarana ny kaonty rehetra (raha tsy misy manambara ny maha izy azy). Tsy mitahiry anarana ny Ledger, fa balances sy laharan'ny kaonty ihany. Tsy misy ny mety hisian'ny "réserva fractional" rehefa mampindrana vola bebe kokoa noho ny tena izy ny banky. Raha ny marina, tsy misy trosa amin'ny bitcoin ledger: na manana vola amin'ny adiresinao ianao ary anao tanteraka izany, na tsy manana ianao ary tsy afaka mampiasa izany mihitsy. Ary koa, Bitcoin dia mamela ny manidy vola amin'ny "fifanarahana": piozila kriptografika natao hanaparitahana ny fanapahan-kevitra eo amin'ny olona maromaro na amin'ny fotoana rehetra.
Bitcoin dia toy ny vola Monopoly: Ny vola madinika dia famantarana tsy misy dikany izay tsy misy vidiny. Ny olona dia manome lanja azy ireo satria misafidy ny hilalao ilay lalao. Raha ny marina, toy izany koa ny volamena na vola hafa.
Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny vola Monopoly: voafetra ny famatsiana marika ary tsy misy afaka manao hosoka. Izany no mahatonga azy ireo ho kandidà tsara ho an'ny fanangonana eken'ny rehetra toy ny vola madinika volamena na volafotsy.
Bitcoin dia sahala amin'ny Git: ao amin'ny Git (rafitra fanaraha-maso dikan-teny zaraina) dia voalamina ao anaty rojo voaaro amin'ny hash kriptografika ny fanovana rehetra ataonao. Raha matoky ny tenifototra farany ianao dia afaka mahazo ny vaovao rehetra teo aloha (na ny ampahany amin'izany) avy amin'ny loharano rehetra ary mbola manamarina fa izany no antenainao. Toy izany koa, ao amin'ny Bitcoin, ny fifampiraharahana rehetra dia voalamina ao anaty rojo (ny blockchain) ary rehefa voamarina, na aiza na aiza misy azy ireo, dia afaka matoky foana ny ampahany amin'ny sakana ianao amin'ny alàlan'ny fanamarinana rojo-hash izay mampifandray amin'ny hash efa misy anao. matoky. Izany dia ahafahan'ny fitahirizana zaraina sy ny fanaraha-maso ny fahamendrehana mora.
Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny Git: amin'ny fomba iezahan'ny tsirairay hiasa amin'ny sampana tokana. Ao amin'ny Git dia mety manana sampana sy fork maromaro ny tsirairay ary manambatra azy ireo mandritra ny andro. Ao amin'ny Bitcoin dia tsy afaka "mitambatra" forks. Ny blockchain dia tena hazon'ny tantaran'ny fifampiraharahana, saingy misy foana ny sampana lehibe indrindra (izay manana ny sandany) sy ny sampana kely tsy nahy (tsy mihoatra ny iray na roa ny halavany) izay tsy misy vidiny mihitsy. Ao amin'ny votoatin'ny Git dia manan-danja kokoa noho ny sampana, ao amin'ny fifanarahana Bitcoin dia zava-dehibe kokoa noho ny votoaty.
Bitcoin dia tahaka ny Bittorrent: ny tambazotra dia mitsivalana tanteraka, tsy misy "mint" na "banky" tokana. Ny blockchain dia toy ny rakitra tokana amin'ny bittorrent: voamarina ara-kriptografika ary zaraina amin'ny solosaina maro. Ny mpandray anjara tsirairay, anisan'izany ny mpitrandraka dia miasa amin'ny antony mitovy. Raha mikorontana ny ampahany iray amin'ny tambajotra dia mety hivezivezy amin'ny faritra hafa ny fifampiraharahana. Na dia midina aza ny tambajotra iray manontolo, dia mbola voatahiry ao amin'ny ordinatera tsy miankina an'arivony maro ny fampahalalana momba ny fifanakalozana ary tsy misy very ny volan'ny tsirairay. Rehefa mifandray indray ny olona dia afaka manohy mandefa fifampiraharahana toy ny tsy nisy zava-nitranga. Samy afaka tafavoaka velona amin'ny ady nokleary ny Bitcoin sy Bittorrent satria tsy lasa radioaktifa ny vaovao ary azo averina soa aman-tsara.
Tsy mitovy amin'ny Bittorrent ny Bitcoin: fa tsy “rakitra” mahaleo tena maro, misy rakitra iray mitombo hatrany: ny blockchain. Ary koa, ny mpandray anjara manan-danja indrindra: ny mpitrandraka dia mahazo valisoa amin'ny asany amin'ny vola tena izy.
Bitcoin dia toy ny fahalalahana miteny: Ny fifampiraharahana rehetra dia hafatra fohy ho an'ny daholobe izay azo tononina na aiza na aiza na ahoana. Raha mandre izany ny mpitrandraka sasany dia hampiditra izany ao amin'ny blockchain ary ho mandrakizay ao amin'ny tantara izany hafatra izany. Ho hitan’ny rehetra ary tsy hisy hahafa-po azy.
Tsy mitovy amin'ny fahalalahana miteny ny Bitcoin: Ny filazana zavatra dia misy vidiny. Mamindra vola madinika izay tsy maintsy atombokao ny fifampiraharahana. Noho izany, tsy ny moron rehetra no mahazo mihiaka, fa ireo izay nanana fahamendrehana ihany no nahazo vola madinika tamin'ny voalohany. Ary koa, ny mpitrandraka dia mety mandà ny fifanakalozana raha toa ka spammy na tsy misy sarany ampy. Noho izany dia tsy misy manome fahalalahana na iza na iza toy ny "amin'ny labiera", fa ny tsirairay dia miezaka ny hiara-hiasa an-tsitrapo.
Bitcoin dia toy ny fifanarahana ara-tsosialy: tranga ara-kolontsaina madio. Miasa toy ny vola izy io raha toa ka ataon’ny olona ho toy izany ary manana fahasahiana mitazona azy sy manaja ny fitsipiny. Ilaina ihany ny teknolojia mba hanomezana fantson-drano ilaina amin'izany fifanarahana izany.
Tsy mitovy amin'ny fifanarahana ara-tsosialy ny Bitcoin: Tsy ilay karazana fifanarahana ampianarin'izy ireo any an-tsekoly. Tsy moramora izany, ary tsy apetraky ny mpitondra sasany. Fitsipika saika tsy azo ovaina izay safidin'ny tsirairay hampiharina amin'ny tenany, noho izany dia manampy amin'ny marimaritra iraisana.
Bitcoin dia toy ny vola amin'ny Internet majika: tsotra izao.
← Explain Bitcoin Like I’m Five Bitcoin dia toy ny fanatanjahan-tena →